“Maalintii la iga bedelay Burco afar boqol oo Taar ayaa loo qoray Siyaad Bare oo la yidhi”.. Bile Rafle – HormoodNews
12/20/2017 9:46 pm by Khadar Muuse Views: 13
Hargaysa (HN): Bille Rafle Guuleed, oo muddo dheer guddoomiye ka soo noqday gobolladda Togdheer iyo Woyooyi galbeed xiligii dawladii kacaankii ee Siyaad Barre, oo dhawaan booqasho ku yimid Somaliland ayaa ka sheekeeyay waxyaabihii uu qabtay berigaas.
Siyaasi Bille Rafle Guuleed, oo haatan ku nool magaaladda Jigjiga ee caasimadda dawlad degaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga ayaa magaaladda Hargaysa kaga qayb galay xafladii caleemo saarka madaxweyne Muuse Biixi.
Waxaanu badhasaab ka ahaa gobolka Togdheer sanadihii 1972-kii ilaa 1974-kii, isagoo markii danbe-na guddoomiye ka noqday gobolka Hargaysa ayaa lagu xasuustoo waxqabad badan oo uu goboladda Togdheer iyo Maroodijeex ka fuliyay mudadii uu gudoomiyaha ka ahaa.
Waxyaabihii ugu waaweynaa ee sida weyn loogu xasuusto Bille Rafle, waxaa ka mid ah dhismaha guriga qabyadda ah ee loo yaqaano Xisbiga ee ku yaalla suuqa idaacadda ee magaaladda Hargaysa iyo wadooyin kaloo badan.
Bile Rafle Guuleed oo caan ku ahaa wax badan oo uu ka qabtay magaalooyinka Burco iyo Hargeysa wakhtigii Siyaad Barre ayaa ka hadlay dareenkiisa guriga qabyoobay ee hadda ah suuqa xisbiga.
Waxaanu Bille Rafle ka sheekeeyay dhismaha gurigan oo uu ugu talo galay inuu noqdo madaxtooyo isaga oo faahfaahiyay inta dhismahaasi uu ka kooban yahay, waxaanu si dareen leh u sheegay inuu gurigaas qabyada ahi uu qalbiga kaga yaalo.
Isagoo ka hadlayay casuumaad dad haldoor ah ugu sameeyeen magaaladda Hargeysa, waxa uu yidhi “Maalintii la iga bedelay Burco afar boqol oo Taar ayaa loo qoray Maxamed Siyaad Bare oo la yidhi ha naga bedelin, Hargaysa iyadu-na sidaa oo kale ayay ahayd.
Labada-ba markii la iga bedelaayay aad ayaan uga xumaaday, weliba gurigaas Bile Suge loo bixiyay (guriga suuqa xisbiga), run baan idiin sheegayaa gurigaasi qalbiga ayuu igaga yaalaa, waa boqol iyo siyaado qol”.
Waxaanu intaasi ku daray “Xagga danbe waxa uu ku lahaa 42 filo oo aan ugu tallo galay inay madaxdu degto, dawladda oo dhan ayuu qaadayaa, lix hool ayuu leeyahay oo shirarka loogu tallo galay, wax kasta ayuu gurigaasi lahaa. Haddii aad gurigaas madaxiisa aad ku istaagto oo aad soo dhawayso ama diirad (telescope) qaadato Jigjiga-na waad arkaysaa, Berbera-na waad arkaysaa.
Maxaa yeelay Biyo-dhacay oo ah meeshiii ugu dheerayd ayaan ka dhisay, markaas gurigaasi waxa weeye guri madaxtooyo u qalma, madaxweynaha-na waan u sheegay, waxaan ku idhi gurigaas dhamays tir, haddii aad dhamays tiri wayda-na waa dhibaato. Anigu-na diyaar ayaan u ahay in aan dhaqaale u guro si gurigaas loo dhiso”ayuu yidhi Bille Rafle Guuleed.
Author: Khadar Muuse